Music osise adịghị egosi? Nsogbu Edozi
> Resource> Download> osise adịghị egosi na Your Music Library? Nsogbu Edozi
Ọ bụ nnọọ ndị mmadụ na-nyefee ha music n'ọbá akwụkwọ si usoro ma ọ bụ usoro na ngwaọrụ ngwaọrụ. Ma n'ụzọ ụfọdụ, n'oge na-ebufe usoro, music artwork nwere ike ịbụ efu ga-adịghị na-egosi na ụfọdụ ngwaọrụ ma ọ bụ egwuregwu. N'ọnọdụ ndị dị otú, ọtụtụ n'ime nwere ike ị gaghị na ọṅụ na album nkà Ile, ọ bụghị ọnyà isi awọ akara ngosi. The isi ihe na-nwere artwork mgbe niile na-egosi bụ na-embed artwork ka music faịlụ nke mere na artwork nwere ike zigara tinyere music faịlụ. Ma, olee otú anyị pụrụ ime na-adị mfe? Echegbula. Nke a bụ ebe Wondershare TidyMyMusic maka Mac (Wondershare TidyMyMusic) abịa na maka enyemaka. Nke a na usoro-akpaghị aka okụt artwork nile songs gị music collection na ị pụrụ embed artwork na dị nnọọ a click. Ike na-eche ka a na-agbalị? Ka anyị hụ a nzọụkwụ-site-nzọụkwụ ndu n'okpuru.
1 mbubata gị music n'ọbá akwụkwọ ka usoro ihe omume
Ọ bụrụ na ị jikwaa music site iTunes, a usoro ga-akpaghị aka iṅomi iTunes n'ọbá akwụkwọ ma tinye niile music na faịlụ tree n'okpuru idozi iTunes mgbe ọ ga-emepe.
Cheta na: N'ihi na ndị na songs bụghị haziri iTunes, ị chọrọ ịga idozi Music na ịdọrọ ndị music nchekwa na faịlụ tree site onwe gị.
2 Chọta artworks nile songs
Gaa nkụnye eji isi mee nke usoro ihe omume ịchọta a iṅomi bọtịnụ. Mgbe ahụ ego igbe akara Chọọ maka unidentified Songs na pịa iṅomi button na-amalite na-achọta artworks nile songs.
Cheta na: Ọ bụ nnọọ adaba chọta duplicates n'oge scanning usoro. Ị naanị mkpa ego igbe nke Chọọ maka duplicated Songs na pịa iṅomi bọtịnụ. Mgbe ị na-ekpebi nke music faịlụ bụ wepu ka ahịhịa mgbe niile duplicates na-achọta.
3 Embed artworks na songs
Họrọ otu song na ego ya artwork na nri n'igbe. Wee pịa Mee bọtịnụ na ala ka embed artwork ka music faịlụ nke mere na artwork nwere ike igosi na n'ebe nile dị otú ahụ dị ka gị iPhone. Ị na-atụ aro ka họrọ ọtụtụ songs na esepu ma na-etinye n'otu oge, nke na-azọpụta ukwuu n'oge na ike.
Cheta na: Ọ bụrụ na ị chọrọ ịgbanwe artwork ọzọ image, ị nwere ike pịa Dezie icon na nri n'igbe na ịdọrọ a Obodo image ka album nkà ebe na-eji dochie ugbu a album nkà.
Ugbu a ọrụ gị na-eme. Mgbe ahụ ị pụrụ mmekọrịta na music gị obere ngwaọrụ na jidere a iko kọfị na-amalite na-anụ ụtọ music na artworks. Ị na-aga na-amasị ya.